ကိုယ်ဝတ်တဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ သင့်အကြောင်း – Trend.com.mm
Posted on March 23, 2018 by Wint
ကိုယ်ဝတ်တဲ့အဝတ်စားကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြလဲ ? မဂ္ဂဇင်းမှာတွေ့တဲ့ စတိုင်လ်လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်ကြတာလား ? သူငယ်ချင်းတွေ အကြံနဲ့လား? ဘလော့ကာ တွေရဲ့နည်းနာတွေအတိုင်းလား? စတိုင်လ်ပညာရှင် Kate Nightingale က လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်မှုအတိုင်း ရွေးချယ်ဝတ်ကြတဲ့ ပုံစံနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဒါဆို ကိုယ်ဝတ်တဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီပုံစံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးပြောပြနေတဲ့ သင့်အကြောင်းက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ?
သင်ဟာ ယုံကြည်ချက်ရှိသူပါ။ အမှီခိုကင်းကင်း လွတ်လပ်စွာနေလိုတယ်။ အဖိုးတန်အရည်ချင်းတွေ ၊ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုတွေကို လိုတဲ့အချိန်မှ ထုတ်သုံးတတ်ပါတယ်။
သူများတွေနဲ့ ကွဲထွက်ရမှာကိုမကြောက်ဘူး။ သက်သာဇုန်ထဲကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုချိန်ဆရမယ် ၊ ဘာကိုတော့ ထိန်ချန်ထားပြီး ဘာကိုတော့ ပြောသင့်တယ်ဆိုတာကို သင့်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။
သင်ဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီး စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်တာရှိရင် ဘယ်လောက်ပဲအခက်ခဲရှိရှိရအောင် ဖန်တီးသူပါ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ၊ လူတွေကအားကျ လေးစားရတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မှာပါ။
သာမန်ဘဝတစ်ခုမှာ ဘယ်လိုပျော်ရွှင်အောင်နေရမလဲဆိုတာ သင်သိတယ်။ သဘာဝတရားရဲ့အလှစစ်ကို လွတ်လပ်စွာခံစားလိုသူဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နောက်ကြောမခံပဲ အမြဲတမ်းတိုးတက်ဖို့သာ ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ သည်းခံတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။ အားအင်အပြည့်နဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိရိတယ်။ ဈေးဝယ်ထွက်ရတာကို အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးပါ။
လက်တွေ့သမားဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်မလွန်ဘူး။ အဲ့ဒီအစား ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို ခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားတတ်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေမှ ယုံကြည်ခံရဆုံးလူဖြစ်ပြီး လာကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကိုလည်း အရမ်းရွေးလွန်းပါတယ်။ အပျိုကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာမျိုးပါ။ ကံကောင်းရင်တော့ ချစ်သူရပါလိမ့်မယ်။